Ahitam-bokatra hatrany ny fanatanterahan’ny polisy ny fisavana amin’ireny faritra fivoahana sy fidirana ny tanàna ireny. Fanaraha-maso mahazatra ny fiara no nataon’ny polisin’Ambanja ka nahatrarana ireto basy telo ireto : Basy lava «fusil à pompe» vita Sovietika 1 ary basy poleta vita gasy 2. Roalahy no nitondra azy ireo raha hihazo an’i Sambava izy ireo niala tao Ambanja. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa hoentina hamidy any Sambava ireo basy. Avy any Toliara ny iray, ny 1 avy any Marovoay ary iray hafa avy tao Ambanja ihany. Manentana hatrany ny mpitandro ny filaminana amin’ny fampitam-baovao avy amin’ny vahoaka mahakasika ireny fihazonana sy fivezivezena basy tsy ara-dalàna ireny any anatin’ny fiarahamonina rehetra any. Nahazo vahana hatrany ny fiparitahan’ny basy, indrindra ireo tsy fampiasan’ny sivily sy vita gasy tato ho ato. Tsy mety tratra ireo rangory fototry ny afo, na ireo mpanefy azy na ireo mpampiditra ny entana avy any ivelany. Miandrandra ny vaovaon’ny fitsarana mba havoaka tambajotran-tserasera koa ny olom-pirenena.